Hapana anoona inotsvaira uye inotsvaira inotsvaira
Naiwo mweya unobva mukati mehupenyu wakadzika
Asccnds, - isina, mayhap, kana yakasununguka,
Nerufu rutsva rwese rwatinodzokera shure tinoona
Maonero akareba edzinza redu
Yedu yakawanda yemhando yakapfuura livcs inoteedzera.
Vol. 1 JANUARY, 1905. Nha. 4
DZIMWE matambudziko akatambudza pfungwa dzevanhu, hapana akakonzera kushushikana kwakawanda kupfuura kweanotenderera kana ekudzokorora kwezviitiko.
Vanhu vekare vaiyedza kuziva mutemo wemijenya kuitira kuti vafananidze hupenyu hwavo. Mazuva ano varume vanotsvaga kuwana mutemo wecyclic wekuti vangaite bhizinesi ravo zvine pundutso. Munguva dzose varume vakaedza kuwana mutemo wemijinga nekuti neruzivo rwakadai vaigona kutevera mabasa avo ekurima vaine chokwadi, wedzedzo, denda, uye nekupa nzara; kufanotaura zvehondo, nedutu, kudengenyeka kwenyika, uye chenjera pakuda kwepfungwa; ziva chikonzero chekuzvarwa, nehupenyu, nerufu, uye nekutevera mamiriro; uye vachifarikanya zvinoitika zvekare, ivo vanogona kududzira zviitiko zvemunguva yemberi nenzira kwayo.
Dingindira rezwi rinotorwa kubva kuChigiriki "kuklos," zvinoreva rin'i, vhiri, kana denderedzwa. Mupfungwa dzakatenderera denderedzwa chiito uye zvinoitika zvetinofambisa kubva pakati, chimiro uye nguva yekutenderera ichayerwa nekwavo uye nekumanikidza kwezvinangwa pavanenge vachibva nekudzoka kwavanobva. Kuguma kweimwe kutenderera kana denderedzwa ndiko kutanga kwechimwe, kuitira kuti kufamba kwacho kuve kwe spiral, sepamhepo yekukoshwa kwetambo kana kusunungurwa kwematanda e rose.
Masekete anokwanisa kukamurwa kuita mapoka maviri akapamhama: izvo zvinozivikanwa uye izvo zviri zvidzidzo zvekufungidzira. Pakati peavo isu tajaira kwazvo kutenderera kwezuva, apo pasi rakaita dudziro imwechete yakatenderedza kutenderera kwayo mumaawa makumi maviri nemana; kutenderera kwemwedzi unoyevedza, kana mwedzi waita runyorwa rumwe kutenderedza pasi nemazuva e28; kutenderera kwegore, apo pasi rakapedza shanduko imwe kutenderera zuva uye zuva rakaita shanduko imwechete kuburikidza nezviratidzo zodiac, nguva inenge mazuva 365; uye gore rakasarudzika kana denderedzwa rekuti precession yeiyo equinoxes apo danda re equator rakambotenderera padanda re ecliptic mumakore 25,868.
Iyo inyaya yeruzivo rwevanhu vese kuti kubva parwendo rwezuva zuva kuburikidza nemapoka enyeredzi, tinowana mwaka yedu mina: chitubu, zhizha, mwaka wekuvhuvhuta, uye nguva yechando, imwe neimwe ichiwedzera kupfuura mwedzi mitatu, uye kuti imwe neimwe mwedzi iyi yakakamurwa kuita zvikamu zvina uye chidimbu, chikamu chimwe nechimwe chemwedzi chiri chikamu che mwedzi sechipfumbamwe chekutanga, mwedzi uzere, chikamu chekupedzisira, uye mwedzi mutsva. Iyo zodiac ndiyo nguva huru yekubva, zuva nemwedzi maoko ayo anoratidza nguva dzenguva. Mushure mezodiac isu takagadzira chronometer ine zviratidzo gumi nembiri; aya anotaridza nguva dzerima uye nerima muzuva rimwe chete maawa gumi nemaviri.
Chinhu chinonakidza kune statistologist uye munyori wenhoroondo kuoneka kweanotenderera pamatambudziko, matambudziko, nzara, nehondo; kutaridzika kwechinotenderera nekutsakatika kwemadzinza, uye kunogara kuchikwira uye kudonha kwenzanga.
Pakati pezvikamu zvega zvega pane kutenderera kwehupenyu hwazvino hunobva kubva mudura kuenda mumuviri kupinda mumhepo-makamuri emapapu, pakushandisa ropa kunge mota yake inoyerera nemapfupa emapapu kuruboshwe kuruboshwe, zvino kuenda kuruboshwe ventricle, kubva ipapo ichipfuura nepakati peanorta inogoverwa kunhengo dzese dzomuviri seropa rekunze. Hupenyu hwazvino pamwe nemasero ehupenyu hwunodzoka kuburikidza nemukati memapenaini, kubva ipapo zvichibva kune venae cavae kuenda kurudyi auricle, kubva ipapo kune kurudyi ventricle, uye kubva ipapo kuburikidza neapmonary artery kuenda kumapapu, uko, kana yakanatswa, iyo zvakare inova inotakura yehupenyu kumuviri, kutenderera kwakazara kunogara anenge makumi matatu masekondi.
Inonyanya kukosha yemasekete ese kwatiri ndeyekuti cyclc inosanganisirwa nyika yepakutanga, yekuzvarwa, hupenyu hwenyika ino, kufa, uye nemashure mekufa. Kubva pane zvakazarurwa zvechitenderera urwu ruzivo rwemamwe magetsi anotevera. Isu tinotenda kuti mukutanga-munhu kwekusimudzira kwemunhu nhoroondo yese yepasi redu yakagadzirwa.
Muviri wemunhu wakakoshwa kuti umhanye kwenguva yakati, kutenderera kwehupenyu hwayo. Munguva ino, zera rakapfuura muhupenyu hwevanhu rinorarama zvakare zvakare nemunhu. Ipapo vhiri rehupenyu rinoshanduka kuenda kutenderera rorufu.
Zviri pamwe nemijenya yekuzvarwa neupenyu nerufu zvakabatwa nehunyanzvi hwekare, nekuti nekuziva kwavo vanogona kupfuura nekubva kunze kweiyo bhaji kubva pazvinonzi, hapana mufambi anodzoka. Chinangwa chekuvandudzwa kwechisikirwo ndechokukwevera zvinhu zvakasikwa mumuviri mumwe, vobva vaziumba kuti dzive chimiro chemunhu, izvo zvinopa mukana wakakura kwazvo wechiitiko kunheyo yakangwara, pfungwa, iri yekugara mumuviri wemunhu. Kune iyo pfungwa chinangwa chehupenyu ndechekuwana ruzivo rwehukama hwayo nechisikwa, kuburikidza uye uchiri mumuviri, kuita mabasa ayo anoteerana neruzivo, uye kuvaka mune ramangwana nezvakaitika zvekare.
Rufu ndiko kuvhara, kuongorora uye kuenzanisa kwehupenyu hwehupenyu, uye nzira yekudzoka kuzvepfungwa dzepanyika ino. Iyo ndiyo gedhi iyo mweya unodzokera kwayo kune yayo nzvimbo.
Iyo yekufa-yekumagariro mamiriro inguva yekuzorora uye kubatwa kwebasa kwehupenyu hwakatangira kutanga kwehumwe hupenyu.
Kuzvarwa uye rufu mangwanani uye manheru emweya. Hupenyu inguva yebasa, uye mushure mekufa kunouya kuzorora, kupora, uye kusimudzira. Sezvo mabasa anodiwa emangwanani anoitwa mushure mekuzorora kweusiku, ipapo basa rezuva, mabasa amadekwana, uye kudzokera kuzorora, saka mweya unoisa pazvividzo zvavo zvakafanira uye ivo vanopfuura nenguva yekukura, kuita muzuva rechokwadi basa rehupenyu, uye vanoiswa parutivi manheru manheru ekukwegura, apo mweya unopfuura muzororo iro rinozvigadzirira rwendo rutsva.
Zvese zviitiko zvechisiko zvinotaurira nyaya yemweya kuburikidza nemijangi yayo, maumbirwo uye kuberekwazve muhupenyu. Tingaite sei kuti titeerere magetsi aya, tichimhanya sei, kuderedza kana kuchinja mafambiro avo? Kana nzira ichinyatsoonekwa, mumwe nemumwe anoiwana musimba rake kuzviita. Nzira iri kuburikidza nekufunga. Kubudikidza nemufungo mundangariro mweya wakauya munyika, kuburikidza nekufunga mweya wakasungwa nenyika, kuburikidza nekufunga mweya unosunungurwa.
Chimiro uye kutungamira kweavo vanofungidzira kunotema kuberekwa kwake, chimiro uye zvaachaenda. Uropi ndiwo musangano wemuviri, pfungwa dzakarongedzwa kubva kumusangano uyu dzinopinda muchikamu kuti vadzokere mushure menguva refu kana ipfupi kune yavo musiki. Sezvo pfungwa dzakasikwa dzinobata pfungwa dzevanhu vorudzi rwakaita senge kufunga, saka vanodzokera kumugadziri wavo kuti vamuitire zvavakaita pane vamwe. Pfungwa dzeruvengo, udyire uye nezvimwe, vanomanikidza musiki wavo kuti afambe senge zviitiko uye zvinomusunga kune nyika.
Pfungwa dzekusava noudyire, tsitsi, uye kusuwa, ita mupfungwa dzevamwe uye, nekudzoka kumugadziri wavo, amusunungure kubva muzvisungo zvekudzokorora kuberekwa.
Idzi ndidzo pfungwa idzo murume anogara achigadzira dzinosangana naye mushure mekufa. Anofanira kugara nemifungo iyi, aigaye uye agosimudzira, imwe neimwe mukirasi yayo, iyo surn mushure izvo zvaitwa, anofanira kudzokera kune ino nyika, chikoro uye mudzidzisi wemweya. Kana kucherechedzwa kwakabhadharwa kune chokwadi, zvinowanikwa kuti pane nguva muhupenyu hwomunhu umo mamwe mhemo dzinodzoka. Nguva dzekuora mwoyo, kusuwa, kusuwa; nguva dzekufara nekufara uye mufaro; nguva dzekuda kana kushuva. Nguva idzi ngadzicherechedzwe, kurwisa maitiro akaipa, uye shandisa mukana wakanaka.
Kuziva uku kunogona kungouya kumurume anova "akachenjera senyoka uye asinganetsi senjiva."